Ubufakazi obusha kwelikaDewani | Isolezwe
Ubufakazi obusha kwelikaDewani
Isolezwe / 30 August 2012, 1:08pm / SAPA
ABASOLWA ngokubulala uNkk Anni Dewani bathathwe bevele eNkantolo eNkulu yaseKapa. Kwesobunxele nguXolile Wellington Mgeni noMziwamadoda Lennox Qwabe oselahlwe yicala. Isithombe: Brenton Geach
ABABULALI bakaNkk Anni Dewani abazange baludingide udaba lokuthi umufi wayezobulawa kanjani. INkantolo enkulu yaseWestern Cape ithulelwe lobu bufakazi izolo.
UMziwamadoda Qwabe olahlwe yicala yiyo le Nkantolo wagwetshwa iminyaka engu-25 ebhadla ejele ngokuthumba nokubulala uNkk Dewani, wethule ubufakazi ngezingxoxo ababa nazo nomshayeli uMnuz Zola Tongo nomsolwa uMnuz Xolile Mngeni.
Uthe kwabakuxoxa, badingida indlela ababezokwenza ngayo ukuthi kubukeke sengathi umufi ubedunwa imoto eGugulethu ngoNovemba 13, 2010.
“UZola wasitshela ukuthi uMnuz Shrien Dewani ufuna ukuba abulawelwe umkakhe kodwa asizange sikudingide ukuthi wayezobulawa kanjani. Sasizokwenza kubukeke sengathi ubulawe edunwa imoto,” kusho uQwabe osephenduke ufakazi wombuso.
UTongo owayeshayela wabatshela umzila ababezohamba ngawo, wabatshela nokuthi uNkk Dewani nomyeni wakhe uMnuz Dewani babezobe behleli ezihlalweni ezingemuva.
UQwabe uthe, uTongo wabatshela ukuthi uma sekubulawa uNkk Dewani akumele kube khona omunye owayezolimala yize engacacisanga ukuthi kwakuzokwenziwa njani-ke ngoDewani.
Ofakazi abaningi bombuso bafakaze bathi uDewani wayengungqondongqondo kwakhiwa itulo lokubulala umkakhe ngesikhathi bevakashele eKapa beze kwi-honeymoon.
Kodwa uDewani ulokhu ekuphike njalo lokhu.
UQwabe phambilini waveza ukuthi abaduni bayalela uDewani ukuba aphumele phandle emotweni base bethi makabaleke angabheki emuva, maqede imoto yashaya yachitha nomkakhe esahlezi ngemuva kuyo.
UQwabe uqhube wafakaza wathi bobabili benoMngeni babazi ukuthi isibhamu sikaDewani yisona esasizosetshenziswa ukubulala uNkk Dewani.
Ummeli kaMngeni, uMnuz Qalisile Dayimani, ubuze ukuthi babhunga yini ngodaba lwesibhamu ngesikhathi behlangene sekubulewe umufi, uQwabe uthe yize engasakhumbuli kahle kodwa kungenzeka ukuthi baxoxa ngesibhamu.